Home News Xukuumada Soomaaliya Kaalin Nuuce Ah Ayay Ku Leedahay Qaraxii Shalay Ka Dhacay...
Xukuumada Soomaaliya Kaalin Nuuce Ah Ayay Ku Leedahay Qaraxii Shalay Ka Dhacay Muqdisho?
Iyado shalay qarax qasaare geytay uu ka dhacay magaalada Muqdisho dad badana ay ku waxleebeynn aya waxa so baxay warar kaso baxaya qaraxaasi.
Wararka iyo xogta an heleyno aya shegeysa in Ciidanka Raiisul Wsaare Kheyre Xukumadiisa ay dhiseyn ee Xasilinta ay sabab u yihiin qaraxii shalay dhacay iyado ay so gudbiyeen gaarigaasi.
Gariga qarxay aya la shegay in uu so gudbay xiligi ay dagalamayen Ciidanka xasilinta iyo ciidanka ilaalada caasimada ka mid ah ee dowlada imaaradka ay tababareyn kuwasi oo ku dagalamay isgoyska tarabuunka.
Ciidanka xasilinta aya la shegay in ay carqaladeyen howlgal wadoyinka ay ka waden ciidanka iyado ay uu dagalkasi ka bilowday gari ay celiyen ciidanka imaradka oo talefon udirsaday ciidanka xasilinta kadibna werarka uu dhacay.
waxa la ogson yahay in gaariga qaraxa siday uu so gudbay xiliga dagaalka uu socday iyado dagaalkasi uu galaaftay niolosha dad shacab ah iyo ciidanka dhexdooda oo qasaaro so galay.
Xukuumada Soomaaliya aya laheyd Qaraxi shalay dhacay eedisa iyada ayana so gudbisay gaarigaasi sida wararka anu ku heleyno.
Xaalada amaan ee Muqdisho ayanan hagaagsaneen iyado ay isaso tarayan dhacdoyinka aman daro ee dalka ka dhaca.